Germalka oo dhigay Rikoor Cusub oo Kiisaska Corona ah, Xayiraado laga Cabsi qabo
HomeWararka CaalamkaGermalka oo dhigay Rikoor Cusub oo Kiisaska Corona ah, Xayiraado laga Cabsi qabo
November 14, 2021 Wararka Caalamka, Wararka Maanta Somaliska 0
Infekshanka corona ee Jarmalka ayaa gaaray heerkii ugu sareeyay , dalkuna wuxuu sidaas ku yeeshay toddobadii maalmood ee u dambeeyay ee la diiwaangeliyay heerka ugu sarreeya ee dhacdooyinka tan iyo markii uu cudurku bilaabmay. sida uu qoray qoray Ritzau.
maalmihii u danbeeyay boqolkiiba 277.4 oo kamid ah 100,000 kun ayuu ku dhacay xanuunka dadka deganka ah . Sidaas waxaa sheegay machadka Robert Koch, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters.
Heerarka caabuqyada sare waxay ka dhigan tahay in xannibaadaha la adkeeyay meelo badan oo dalka ah.
Dhawaan, caasimadda Berlin waxay go’aansatay in laga bilaabo Isniinta ay tahay in lagu tallaalo si aad u booqato makhaayadaha, iyo meelo kale xarumaha dhaqanka iyo goobaha ciyaaraha.
Magaalada Berlin, sida laga soo xigtay Berliner Morgenpost, heerka dhacdooyinka ayaa hadda ka badan 300.